Apple waxa laga yaabaa in lagu ganaaxo Ruushka ganaax aan la sheegin BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Shirkadda Apple ayaa laga yaabaa inay Ruushka ku mutayso ganaax aan la cayimin oo la xidhiidha lacagaha ay ku bixiso app-ka
Shirkadda Apple ayaa laga yaabaa inay Ruushka ku mutayso ganaax aan la cayimin oo la xidhiidha lacagaha ay ku bixiso app-ka
Ilaalo Ruush ah ayaa hadda ku raad joogta baadhitaan cusub oo lid ku ah dukaanka App-ka ee Apple. Waxay timid ka dib markii sameyaha iPhone ku guuldareystay inuu fuliyo sharciyada isteerinka ka soo horjeeda taasoo u ogolaaneysa horumariyeyaasha inay ku wargaliyaan isticmaalayaasha ikhtiyaarka iibsiga beddelka ah ee lacag-bixinta app-ka.
Ruushka ayaa furay kiis ka dhan ah Apple oo ku saabsan lacag-bixinnada app-ka
Shirkaddu waxay hore u ogolaatay inay dhaqangeliso xeerarka ka hortagga isteerinka
Balse Apple ayaa ku guul darreysatay inay fuliso waqtigii loo qabtay, taasoo keentay in Ruushka uu tallaabo qaado
Ruushka ayaa bilaabay baaritaan lid ku ah dukaanka Apple App Store
Bishii Ogosto 2021, garsooraha federaalku wuxuu xukumay Apple waa inay u ogolaataa kuwa sameeya app-ka inay u diraan isticmaaleyaashooda nidaamyada kale ee lacag bixinta. Apple waxa ay kaga jawaabtay iyada oo xaqiijinaysa in ay bedeli doonto xeerka isteerinka si ay horumariyayaashu macaamiishooda ugu sheegaan hababka lacag bixinta ee ka duwan wax kala iibsiga app-ka. Asal ahaan, lacagaha beddelka ah waxay dhaafaan goynta Apple.
Si ula kac ah ama yaysan ahayn, si kastaba ha ahaatee, Apple waxay ku guuldareysatay inay buuxiso waqtiga kama dambaysta ah si ay u hirgeliso isbeddelada, kor u qaadida ilaalada Ruushka ee loo yaqaan Roskomnadzor si ay tallaabo u qaado. Xakamaynta monopoly-ka ayaa xaqiijisay inay Apple ka baadhayso lacagaha kale ee App Store, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday Reuters.
Apple ayaa bishii hore la kulantay dib u dhac ku yimid shuruucdeeda App Store ee gudaha Mareykanka bishii hore markii garsoore federaal ah uu soo saaray go'aan ku qasbaya shirkadda inay u ogolaato horumariyeyaasha inay u diraan isticmaaleyaashooda nidaamyada kale ee lacag bixinta.
Shirkadda weyn ee tignoolajiyada Maraykanka ayaa wajihi karta ganaax ku salaysan dakhliga ka soo gala Ruushka, haddii lagu helo dambiga, sida uu sheegay maamulaha. Ma aysan tilmaamin inta uu le'eg yahay ganaax kasta. Shirkadda ayaa mar sii horreysay laga soo saaray digniin ku saabsan arrintan waxaana la siiyay Sebtember 30 kama dambays ah "joojinta xadgudubka suuqa".
Apple ayaa sidoo kale wajahaysa arrimo kale oo kor u kacaya oo ku saabsan suuqa 145 milyan ee qof.
Dhibaatooyinka Apple ee Russia
Dhawr sano ka hor, shirkadaha sharciga ee fadhigoodu yahay Moscow oo matalaya tiro ka mid ah milkiilayaasha iPhone ayaa Apple u jiiday maxkamad sababo la xiriira burburka. Sannadkii 2021-kiina, Ruushku waxa uu Apple ku dhuftay ganaax dhan 12 milyan oo dollar, sababtoo ah App Store-kiisa waxa uu ku xad-gudbay xeerarka ka hortagga keli-taliska ee waddanka.
Sidoo kale, sharciga cusub ee ilaalinta dalka ayaa ku hanjabaya inuu Apple TV+ ka saarayo suuqa. Iyada oo laga jawaabayo, Apple hadda waxay horumarinaysaa bandhigyada luqadda Ruushka ee adeeggeeda fiidiyowga.
Apple ayaa sidoo kale lagu qasbay in ay wax ka bedesho habka dejinta iOS ee macaamiisha Ruushka.
Mar kasta oo aad wax app ah ka soo gadato sida shayga casriga ah ee ciyaarta ama rukunka qayb ka mid ah nuxurka, Apple waxay ku haysaa inta u dhaxaysa 15-30 boqolkiiba lafteeda, inta soo hadhayna waxay aadaysaa horumariyaha. Ujradaas waxaa looga soo horjeedaa maxkamadaha adduunka. Sidii aan horay u soo sheegnay, Apple waxay isticmaali jirtay inay ka mamnuucdo horumariyeyaasha inay badhamada geliyaan barnaamijyadooda kuwaas oo u qaadi doona booqdayaasha degelka debadda ee ikhtiyaarka lacag bixinta.
Inkasta oo Apple ay ogolaatay in ay hirgeliso isbeddelada isteerinka lidka ku ah si looga fogaado in ay isku dhacaan xeeriyeyaasha, qofna ma garanayo sida nidaamka cusubi u ekaan doono oo dareemi doono.
Apple weli ma cusboonaysiin dukumeenti horumariyaha leh sharci kasta oo ka-hortagga isteerinka.
Teardown teaser ee 14-inch MacBook Pro wuxuu daaha ka qaadaa tabsiyada jiidashada batteriga hoostiisa
Filimada Horror Tech ee ugu Fiican ee la daawado Halloweenkan